"Waan Ceeboobay" Yuusuf Garaad Oo Qormo La Cajiib Ah Qoray!!!
Saturday January 13, 2018 - 19:36:19 in Wararka by Mogadishu Times
Xuseen Shiikh Axmed Kaddare oo ahaa dhaqan yaqaan ayaa beri Radio Muqdisho ka sii deyn jiray Barnaamij toddobaadle ah oo ku saabsan Dhaqanka. Kaddare AUN wuxuu ahaa hadalyaqaan, caqli u saaxiib ah.
Wuxuu ku jawaabay:Waxaan ahay nin weyn oo ceeboobay ee iga raalli ahaada.Dadku marka shaqada laga joojiyo muran iyo dacwad ayay inta badan ka keeni jireen. Kaddare sidaas oo kale ayaa laga filyay, laakiin wuu ku duwanaaday.
Inkasta oo ay labada mas’uuliyadood ay kala culus yihiin, haddii aan fikirka Kaddare qaato waxay noqoneysaa in aan ceeb la wadaago. Waxaase jira asbaabo aan uga duwan ahay oo aan ugu bareeray "ceebta”.
W/Q:- Yuusuf Garaad.; EX Wasiirka Arrimaha Dibadda.